Senator Ayuub “Waxaan ka shaqeynayay sidii aan codka dadkeyga u gaarsiin lahaa fagaarayaasha lagu gaaro go’aamada dalka“ – Kalfadhi
Maanta waxay ku beegnayd sanadguuradii afraad ee maalintii dadka degaankaygu ii doorteen inaan ku metelo golaha Aqalka Sare ee baarlamanka Dawladda Federaalka Soomaaliya. Waxay ahayd fursad weyn oo aan dalka iyo dadkaygaba ugu shaqaynay xilli adag, isla markaana garab istaagnay dawladda iyo dadaalada dib loogu dhisayo nabadda iyo dawladnimada Soomaaliya.
Afartaa sano ee aan xilka hayey waxaan dadaal badan ku bixiyey sidii dadka degaankayga ee aan metelo ee reer Awdal ay xuquuqdooda siyaasadeed, shaqo iyo horumarineed uga heli lahaayeen dawladda Federaalka, waxana ka shaqaynayey in codka dadkaygu uu gaaro meelaha lagu gaaro go’aamada.
Ma aanan ahayn qof ku cusub saaxadda siyaasadda, horay waxaan uga soo shaqeeyey xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, wasaaradda arrimaha dibadda, anigoo markii ugu danbaysay ka mid ahaa ergada diblamaasiyadeed ee Soomaaliya u fadhiya dalka boqortooyda Sucuudi Arabia. Khibradahaas iyo xiriirka aan la laha dadka ku jira hay’adaha kala duwan ee dawladda iyo kuwo caalami ah waxay i dhaxalsiiyeen inaan si wanaagsan u guto waajibaadkaygii afartii sano ee la soo dhaafay.
Iyadoo xilli muhiim ah dalkeennu marayo maanta, waxaan sii wadayaa halgankeenna dawladnimada Soomaaliya iyo u adeegidda ama ka shaqaynta danaha dadka degaankayga ee reer Awdal. Walaalayaal waxaa iga go’an inaan ka sii shaqeeyo maslaxadda dadkeenna, waxaan hadda wixii ka danbeeya ka shaqayn doonaa in degaankii loo helo ilo dhaqaale, Isla markaana la dhiso kaabayaasha dhaqaalaha sida garoomo diyaaradeed, jidad iyo dekedo. Waxaa intaa dheer fursado kale oo dhaqaale-abuur ah oo xoogga lagu saarayo dhinacyada waxsoosaarka gudaha.
Walaalayaal, waxaan ugu danbayntii doonayaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii codkooda ii siiyey iyo kuwii ila shaqeeyey ee i garab istaagay. Waxaan innoo ballan ah in aynu geeddiga iyo hayaanka halgankan aynu halkaa ka sii wadno, si aynu u xaqiijino hadafyadeenna ummadeed iyo kuwa degaan.
Hawl kama daale, weli waa hogadii!
W\_Q Ayuub Ismaaciil Yusuf